Intombazane yeqhwa: ngubani oyibhalile, imayelana nani nokuzivumelanisa nezimo | Izincwadi Zamanje
Intombazane yeqhwa akuyona incwadi yakamuva. Eqinisweni, yaphuma ngo-2020 futhi yathengisa kakhulu, njengezincwadi zangaphambilini zombhali. Yize besivele saziwa kahle futhi sidunyiswa, le ncwadi ikwenzela kakhulu ukujwayela kwayo ochungechungeni lweNetflix, ebuye ibhejele ababhali baseSpain ngochungechunge lwabo lwaseSpain.
Kepha yini okufanele uyazi ngeThe Snow Girl? Uyazi ukuthi yabhalwa ngubani? Imayelana nani? Uma kuyincwadi eyingqayizivele noma kukhona ukuqhubeka? Sikuphendula konke, nokunye okuningi, ngezansi.
1 Ubani obhale i-Snow Girl?
2 Ngabe ikhuluma ngani i-Snow Girl?
3 Yiluphi uhlobo i-Snow Girl?
4 Ngabe kukhona ukuqhubeka kwencwadi?
5 Ingabe kukhona izindawo zokuhlala?
Ubani obhale i-Snow Girl?
Uma kufanele sikhombe 'umenzi wobubi' ukuthi I-Snow Girl yavela ezitolo ezidayisa izincwadi ngo-2020 lokho-ke UJavier Castillo. Ungumbhali ozinikele, ngoba le noveli akuyona eyokuqala, kodwa ingeyesine. Amanoveli akhe okuqala, "Usuku okwalahleka ngalo ingqondo" nokuthi "Usuku okwalahleka ngalo uthando", kwamenza waphumelela futhi kusukela lapho ubelokhu ephumelela ngencwadi ngayinye ayikhiphile.
Kodwa ngubani uJavier Castillo? Lo mbhali wazalelwa eMalaga ngo-1987. Inoveli yakhe yokuqala yabhalwa ngenkathi ehamba ngesitimela eya noma ebuya emsebenzini (njengomeluleki wezezimali) ekhaya lakhe. Lapho eseqedile, futhi ecabanga ukuthi inoveli yakhe ingcono kakhulu kunaleyo eyayishicilelwe, wanquma ukubhalela abashicileli ukuzama inhlanhla yakhe. Kodwa-ke, bayenqaba, futhi wanquma ukuzishicilela yena. Ngakho-ke, lapho eqala ukuphumelela (futhi sikhuluma ngokuthengisa izincwadi ezingaphezu kwenkulungwane ngosuku e-Amazon), abamemezeli baqala ukungqongqoza emnyango wakhe.
Kangangokuba wakwazi ukuvalelisa emsebenzini wakhe wokuba ngumeluleki wezezimali ukuchitha sonke isikhathi sakhe ebhala amanoveli amasha, azi ukuthi impumelelo inaye, njengoba bekulokhu kunjalo.
Ngabe ikhuluma ngani i-Snow Girl?
I-Snow Girl inesakhiwo sayo esikhulu a umcimbi owenzeka ngo-1998 futhi okwenza impilo enhle yabazali ishintshe ngokuphelele. Lapho indodakazi eneminyaka emithathu ubudala inyamalala ingenamkhondo, wonke umuntu ulahlekile, akazi ukuthi abheke kuphi noma abasize kanjani abazali abangatholi mpendulo ngokuthi indodakazi yabo ikuphi.
Ngokungafani namanye amanoveli, kule Nqaba ikhombisa ukuthi imizwa yalabo bantu abathintekayo injani, ukuthi bahlupheka kanjani nokuthi banjani ngokomzwelo, into, ezincwadini ezedlule, eyayingabonwa kangako.
Uphi uKiera Templeton? ENew York, 1998, i-Thanksgiving Parade. Kiera Templeton, uyanyamalala esixukwini. Ngemuva kokuseshwa okuxakile kulo lonke idolobha, othile uthola imicu yezinwele ezimbalwa eduze kwezingubo ebezigqokwe yile ntombazanyana. Ngo-2003, ngosuku lapho uKiera ayezohlanganisa iminyaka eyisishiyagalombili, abazali bakhe, u-Aaron noGrace Templeton, bathola iphakethe elingajwayelekile ekhaya: iteyipu ye-VHS enerekhodi lomzuzu elilodwa leKiera elidlala egumbini elingajwayelekile. Ngemuva kokuthengisa amakhophi akhe angaphezulu kuka-650.000 wamanoveli akhe angaphambilini, uJavier Castillo uphinde wahlola ukuthi usehlanzekile yini neThe Snow Girl, uhambo olumnyama oluya ekujuleni kukaMiren Triggs, umfundi wezobuntatheli oqala uphenyo olufanayo futhi athole ukuthi impilo yakhe iyathanda Ama-Kiera agcwele okungaziwa.
Yiluphi uhlobo i-Snow Girl?
I-Snow Girl, njengezincwadi eziningi zikaJavier Castillo, Kungaphakathi kohlobo lokusola. Khumbula ukuthi lokho okumayelana nokuveza imfihlakalo, yingakho umbhali esebenzisa imigqa emibili ayifaka phakathi.
Le ndlela yokubhala iyingozi futhi abafundi abaningi abaqala okokuqala bangakhungatheka ngoba nganoma yisiphi isikhathi esithile awazi ukuthi usesikhathini samanje, esedlule. Kepha lokho kusekuqaleni kuphela, lapho ungakazazi izinhlamvu; lapho-ke izinto ziyashintsha futhi lokho kusonteka esakhiweni akusizi nje kuphela ukuthi uqonde ukuthi kungani abalingiswa abaphambili benje, kepha futhi usheshe ubone umugqa wesikhathi olandelwayo (futhi kukho kokubili imfihlakalo).
Ngabe kukhona ukuqhubeka kwencwadi?
UJavier Castillo ngumbhali othambekele ekuhlanganiseni izincwadi zakhe, noma enze ukuqhubeka kwazo. Kwenzeka kuye ngo- "Usuku okwalahleka ngalo ubuhlanya", olwaluthatha njengezincwadi ezimbili, kwathi ngemuva kokuphumelela kweyokuqala, akazange anqikaze ukwehlela emsebenzini ukuze athole ingxenye yesibili. Kepha kuthiwani ngeThe Snow Girl? Ingabe ikhona ingxenye yesibili?
Yebo, umbhali uqobo uphendule lo mbuzo kubafundi bakhe, uxazulula inkinga. Futhi ngukuthi, ngokungafani nezinye izincwadi, lena ikakhulukazi yayingeke ibe yingxenye yesaga, ngakho-ke sikhuluma ngencwadi enesiqalo nesiphetho, ngaphandle kokuningi. Vele, phakathi kwamakhasi ayo singathola izinhlamvu okuthi, uma ufunde imisebenzi yangaphambilini, izwakale ifana nawe. Ngakho-ke, ngandlela-thile, kungukuqhubeka, nezinye izinhlamvu, zamanoveli wangaphambilini ombhali.
Ingabe kukhona izindawo zokuhlala?
Kufanele sikuxwayise ukuthi, njengezinye izincwadi eziningi, iThe Snow Girl nayo izolungiswa ibe yisithombe sangempela. Ngokuqondile, bekulokhu kunjalo INetflix ebikade inentshisekelo yokuthola amalungelo futhi iqopha uchungechunge.
Kuze kube manje, akukho okuningi okwaziwayo ngalolu chungechunge olusha, kepha izindaba zaphuma ngo-Ephreli 2021 futhi uma kubhekwa ukuthi iNetflix iyashesha lapho wenza izinqumo, into ephephe kakhulu ukuthi mhlawumbe ngo-2022 noma ngo-2023 singabe siyibukile.
Ngaphezu kwalokho, umbhali ujabulile kakhulu ngoba i-The Snow Girl akuyona ukuphela kokushintshwa kwamanoveli akhe. Futhi, kuleli cala, ngokusebenzisa iGlobomedia neDeAPlaneta, basebenza ochungechungeni oluzohlanganisa amanoveli amabili okuqala ombhali: "Usuku okwalahleka ngalo ubuhlanya" kanye "Nosuku okwalahleka ngalo uthando." Akukho okwaziwayo ngabo kuze kube manje, kepha impela izindaba ngabo zizofika kungekudala.
Uke wayifunda incwadi ethi The Snow Girl? Ucabangani ngakho? Sitshele umbono wakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Intombazane yeqhwa